अमेरिकामा ज्यानमारा जाडो, तापक्रम माइनस ७० सम्म पुग्ने चेतावनी
१७ माघ, काठमाडौं । अमेरिकामा दशकौंपछि सबैभन्दा जाडो भएको छ । उत्तरी ध्रुवबाट सुरु भएको समुद्री आँधीले अमेरिकाको मध्यपश्चिम राज्यमा जताततै बरफ जमेको छ । यसलाई ‘पोलर भर्टेक्स’ भनिएको छ । यसको कारण अमेरिकाका ९ करोडभन्दा बढी जनता शून्यदेखि माइनस १७ डिग्री तापक्रमको जाडो सहन बाध्य छन् । पोलर भर्टेक्सका कारण तापक्रम माइनस ४० देखि
१७, माघ, चितवन । चितवनको भरतपुर अस्पतालमा बिरामी कुरुवाहरुका लागि अलग्गै भबन बन्ने भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना अन्र्तगत शहरी विकास मन्त्रालयको ६ करोड दुई लाखको लागतमा बिरामी कुरुवा घर बन्ने भएको हो । घरको शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाद राईले एक कार्यक्रमका बीच शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ
१७ माघ, काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीले अनसनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि तुरून्त कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी उक्त पार्टीले प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको विधेयकले सीमित नेता र व्यापारीको हित तथा आम जनताको अहित हुने भएकाले त्यसलाई राष्ट्रियसभाबाट सच्याउनु पर्ने बताएको छ । ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक जुन ढङ्गबाट
चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट आजै पारित गर्ने तयारी
१७ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ माथिल्लो सदनबाट पारित हुने भएको छ । दिउँसो दुई बजे बोलाइएको राष्ट्रियसभा बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयक पारित होस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको विरोधबीच प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक गत सोमबार राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएको थियो ।
१७ माघ, वीरगञ्ज । मानव सेवा आश्रम वीरगञ्ज शाखामा बुधबार एक भारतीय नागरिक आइपुगे । उनलाई देख्नासाथ आश्रमभित्र एक युवती भक्कानिँदै गएर अंगालो हालिन् । भारतको बिहारस्थित मानीपुरबाट आएका ती व्यक्ति थिए विरन राम । र, उनलाई छाँद हाल्दै अंगाल्ने युवती उनकै माइली छोरी नितु कुमारी थिइन् । २५ वर्षीया नितु र बुबा विरनको भेट
जिल्ला न्यायाधीशमाथि निलम्बन र स्पष्टीकरण, एनसेलको सुनुवाइ बृहत पूर्ण इजलासमा
१७ माघ, काठमाडौं । न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि आक्रामक अभियान थालेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले दुईजना जिल्ला न्यायाधीशलाई निलम्बन गरेका छन् । न्याय परिषदमार्फत थालिएको यो अभियानका क्रममा अन्य दुई जिल्ला न्यायाधीशलाई एक हप्ते स्पष्टीकरण सोधिएको छ । न्याय सम्पादनमा बदनियत देखिए न्यायाधीश आत्रेयले मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा अवैध असुली गरेको भन्दै सरकारले
निदाउँदा देखेको सपनालाई मानिसहरु झट्टै बिर्सिन्छन् । तर, दिनमा खुल्ला आँखाले देखेको सपनाले उनीहरुलाई हरदम पछ्याइरहन्छ । चलचित्रको नायक बन्ने सपना बिराज भट्टले खुल्ला आँखाले देखेका थिए । त्यसैले यो सपना पूरा गर्न उनले निकै मिहेनत र संघर्ष गरे । अन्ततः नेपाली चलचित्रमा आफूलाई स्थापित गराउन सफल पनि भए । संघर्षका दिनहरुमा उनलाई रोक्न खोज्ने
१७ माघ, काठमाडौं । मंगलबार दोलखाबाट काठमाडौंको पुरानो बसपार्कमा झर्नेबित्तिकै पिसाव गन्हाइरहेको ठाउँमै उत्रिएपछि वीरचरण श्रेष्ठले मुख खुम्च्याउँदै भने, ‘यस्तो पनि कहीँ बसपार्क हुन्छ ?’ एउटा राजधानीको प्रमुख बसपार्क कस्तो हुुनपर्ला त ? यसमाथि बहस हुन सक्छ । वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गराउन पटक–पटक काठमाडौं आइरहने श्रेष्ठलाई भने स्मार्ट सिटी बन्छ भनिएको राजधानीको मुख्य बसपार्क
डा. केसीलाई सुशीला कार्कीको ढाडस : निश्चिन्त हुनुस्, तपाईंको माग पूरा हुन्छ
१६ माघ, काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकारसामू आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्नुको विकल्प नभएको बताएकी छन् । बुधबार दिउँसो डा. केसीलाई भेट्न शिक्षण अस्पतालस्थित अनसनस्थल पुगेकी उनले डा. केसीको माग पूरा गर्दा कसैको हार नहुने, जनताको जित हुने बताइन् । कार्कीले अघि भनिन्, ‘आज मेडिकलको क्षेत्रमा जुन सुधार आएको छ, यो
कांग्रेसले डा.केसीको मुद्दा बोक्ला ? सरकारले वार्ता कहिले गर्ला ? कांग्रेस अल्मलियो, सरकार डा. केसीसँग
१५ माघ, काठमाडौं । सरकारले प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको माग सम्बोधन गर्दै गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाको नाममा खुलेका अस्पताललाई संघ मातहतमा राख्ने निर्णय गरेको छ । १७ गते संसदमा यो निर्णय जानकारी गराउने सरकारको तयारी छ । सरकारलेअस्पताबारे माग पूरा गरेसँगै अब कांग्रेसभित्र छलफल सुरु भएको छ- डा. गोविन्द केसीको मुद्दामा के गर्ने ? उता सरकारी